Ashley Cole Oo Laga Yaabo Inuu Ka Tago Chelsea Kadib Markii Loo Soo Bandhigey Hal Sano Oo Heshiis Kordhin Ah - jornalizem
Ashley Cole Oo Laga Yaabo Inuu Ka Tago Chelsea Kadib Markii Loo Soo Bandhigey Hal Sano Oo Heshiis Kordhin Ah
Ashley Cole ayaa la sheegay in uu diyaar u yahay inuu isaga tago Chelsea kadib markii loo soo bandhigey heshiis cusub oo hal sano ah.
Daafaca England ayaa ku jira sanadkiisii ugu dambeeyay ee heshiiska uu kula joogo Chelsea waxana uu si xor ah uu ugaga tegi karaa kooxda marka la gaaro bisha Janaayo ee soo socota.
Qof ka mid ah Chelsea ayaa sheegay: “Mr Abramovich waxa uu leeyahay sharci ah ciyaaryahankii da’adiisa ay 30jir ka weyn tahay waxa loo kordhin karaa heshiiskiisa hal sano oo qura.
“Qof walba waa ogyahay in uu yahay daafaca dhinaca bidix ee caalamka ugu wanaagsan. “Si adag ayuu u tababartaa,wuuna is dhowraa waxana uu ciyaari karaa sanado badan oo soo socda. Ma jiro koox dunida ka jirta oo aan six or ah ku qaadanayn Cole.”
Cole oo 31 jir ah ayaa waxa uu ka tegey 2006dii Arsenal isagoo sheegay in uu ku dhowaaday in uu shil baabuur galo kadib markii ay kooxda Gunners ay u sheegtay in uu qaadanayo lacag dhan £55,000-toddobaadkii.
Hadda oo uu Cole ka maqnaan doono kulanka berry ee England la ciyaarayso Moldova dhaawac awgii ayaa waxaa uu dhexda uga jiraa dagaal dhinaca kunturaada ah.
Tababaraha Real Madrid Jose Mourinho ayaa aad u jecel laacibkiisii hore ee Cole haddii uu Cole uu ka dhaqaajiyo Chelsea waxaa laga yaabaa inay lacag badan ay u soo bandhigaan kooxaha Paris St Germain iyo Zenit St Petersburg
Cole waxa uu rajaynayay in uu mustaqbalkiisa ku dhamaysto kooxda Stamford Bridge.
Waxaana meel dheer ku sii ridey xaalka Cole kadib markii ay shan sano heshiis ah la saxiixatay Chelsea daafaca Ryan Bertrand.
Ashley Cole ayaa la sheegay in uu diyaar u yahay inuu isaga tago Chelsea kadib markii loo soo bandhigey heshiis cusub oo hal sano ah.Daafaca England ayaa ku jira sanadkiisii ugu dambeeyay ee heshiiska uu kula joogo Chelsea waxana uu si xor ah uu ugaga tegi karaa kooxda marka la gaaro bisha Janaayo ee soo socota.
Qof ka mid ah Chelsea ayaa sheegay: “Mr Abramovich waxa uu leeyahay sharci ah ciyaaryahankii da’adiisa ay 30jir ka weyn tahay waxa loo�kordhin karaa heshiiskiisa hal sano oo qura.
“Qof walba waa ogyahay in uu yahay daafaca dhinaca bidix ee caalamka ugu wanaagsan.
“Si adag ayuu u tababartaa,wuuna is dhowraa waxana uu ciyaari karaa sanado badan oo soo socda. Ma jiro koox dunida ka jirta oo aan six or ah ku qaadanayn Cole.”
Cole oo 31 jir ah ayaa waxa uu ka tegey 2006dii Arsenal isagoo sheegay in uu ku dhowaaday in uu shil baabuur galo kadib markii ay kooxda Gunners ay u sheegtay in uu qaadanayo lacag dhan � £55,000-toddobaadkii.